ဒီလိုရှိတယ်…စောက်ကုလားရဲ့| Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဒီလိုရှိတယ်…စောက်ကုလားရဲ့ 
Posted by phone_kyaw on Jul 18, 2012 in Copy/Paste | 36 comments
ဒီစာကို လူမျိူးရေး မုန်းတီးမှုနဲ့ ရေးတာမဟုတ်ဘူး။ အသက် ၃၃-နှစ်အတွင်းမှာ ကြုံတွေ့ ရတဲ့ အတွေ့ အကြုံကို တင်ပြတာပါ။ ကျနော့်စာကိုဖတ်တဲ့ကုလားကစလို့ ဗမာအဆုံး စိတ်မဆိုးစေချင်ပါဘူး။ သေချာတွေးကြပါလို့ ပဲ ပြောချင်တယ်။
အခုတစ်လော ကုလားအရေးက အရမ်းကို ကြောက်စရာကောင်းလာပြီ။ ဒါက ကျနော့်အတွေးပါ။ ရိုဟင်ဂျာအရေးကို သူတို့ မရမချင်းဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ကြလိမ့်မယ်။ အဓိက လေလိုင်းကနေ ကုလားခေါင်းဆောင်က ကြပ်ပေးနေတယ်။ ဘာမှမသိတဲ့ကုလားတောသားက အဟုတ်ကြီးထင်ပြီး ထချလိမ့်မယ်။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် အသေခံဗုံးခွဲဖို့ အဆင့်ထိပြင်နေပြီ။ နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ အီရတ်က ကုလားတွေပြောတဲ့စကားက အဲဒိလမ်းကို သွားမယ်လို့ အရိတ်အမွတ်ပြောနေတယ်။ ဆိုတော့ ကုလားနိုင်ငံမှာ ဖြစ်တဲ့ အသေခံဗုံးခွဲမယ်ဆိုတဲ့ ပေါ်ပြူလာဆီကို ဦးတည်လာမှာသေချာတယ်။
ကျနော်တို့ ဒီလိုဖြစ်လာရင် ဘာလုပ်မလဲ၊ ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကို ကြိုတင်တွေးဖို့ လိုတယ်။
နိုင်ငံရေးအရစကားပြောတာကိုလုပ်မလား။ စစ်ရေးနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းမလား။
ကျနော်တော့ တစ်ခုမှ မလုပ်စေချင်ပါဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ နိုင်ငံခြားက ကုလားခေါင်းဆောင်တွေပြောနေတာကို မေ့လိုက်ပါ။ ပြန်လည်ပြောဆိုတာ အင်တာဗျူးတာ မလုပ်ပါနဲ့ ။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ စကားလုံးသုံးတိုင်း ကျနော်တို့ လူ့ အဖွဲ့ အစည်းကနေ ထုတ်ပြစ်ပါ။ ဒီစကားလုံးက ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိူးကို စော်ကားတာလို့ ကျနော်ထင်တယ်။
ယနေ့ အချိန်မှာ ရိုဟင်ဂျာစကားလုံးက ဈေးအရမ်းကြီးနေတဲ့ကာလဖြစ်နေပြီ။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒုက္ခသည်ဖြစ်ဖို့ အတွက် ဒီစကားလုံးက အကောင်းဆုံးပဲ။ မြန်မာတွေတောင် နိုင်ငံရေးဒုက္ခသည်လိမ်စားသေးတာပဲ။ ကုလားဆိုရင် ပိုဆိုးပေါ့ဗျာ။
ထိုင်းမှာ လူကုန်ကူးတဲ့လူတွေ၊ အင်ဒိုနီးရှားမှာ လှေနဲ့ လူကုန်ကူးတဲ့လူတွေ၊ မြန်မာပြည်မှာ ဆေးအတုလုပ်တဲ့လူတွေရဲ့ ဇစ်မြစ်ကိုပြန်ကြည့်ပါ။ ကရင်ပြည်နယ်က ကရင်တောသားက ဒီလို မလုပ်ဘူး။ နောက်ဆုံးအရမ်းကိုလည်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ဗမာလူမျိူးကတောင် မလုပ်ဘူး။ ကုလားကတော့ လုပ်တယ်။ ကောင်းတဲ့ကုလားတော့ရှိတယ်။ အင်မတန်နည်းတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကုလားဆိုရင် ဗမာတွေကြည့်မရဘူးဖြစ်နေတယ်လို့ ထင်တယ်။
ကုလားအားလုံးကို ကြည့်မရတဲ့လူတွေကတော့ ခေါင်းမရှိလို့ ပဲ။ ကျနော့်မှာ မွတ်စလင်သူငယ်ချင်းတွေရှိတယ်။ ဒီကောင်တွေ ကျနော့်ကို ရိုဟင်ဂျာစကားလည်းမပြောဘူး။ သူတို့ ကိုယ်သူတို့ လည်း ရိုဟင်ဂျာလို့ မသတ်မှတ်ဘူး။ အခုတော့ စာတတ်ပြီး နိုင်ငံရေးကိုနားမလည်တဲ့ ဒေါက်တာ ၀က်ကာဆိုတဲ့လူပြောနေတာက အရှုးချီးပန်းပဲ။ ဒီဘဲက Pest Management လို့ ခေါ်တဲ့ အင်းစက်တွေကို သတ်နည်းပဲ ကျွမ်းတယ်။ နိုင်ငံရေးကိုတော့ ဘာမှ နားမလည်ဘူး။ အဲဒါကို စာမတတ် ဒုက္ခသည်ဖြစ်ချင်တဲ့ ကုလားက ထောက်ခံနေတော့ သွားရောပဲ။ ကိုယ့်ဘ၀ကို ကိုယ်ဖျက်ဆီးသလိုပဲ။
ပါကစ္စတန်ကရွာတွေမှာ ဥပဒေမရှိဘူး။ သူတို့ ရိုးရာဥပဒေပဲရှိတယ်။ အစိုးရကလည်း သွားလည်တဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကို သတိပေးတယ်။ ဒါကတော့ ခင်ဗျားတို့ သွားရင် သတိထားသွား။ ကျနော်တို့တာဝန်မယူနိုင်ဘူး။ သူတို့ ရိုးရာနဲ့ သူတို့ ဖြစ်တော့ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် အစိုးရက မကယ်နိုင်ဘူး။ ဒါတောင် ကုလားအစိုးရပြောတဲ့စကား။
အဲဒိရွာတွေမှာ ကြိုက်တဲ့လက်နက်ပြော အကုန်ရတယ်။ လက်နက်အသေးကိုပြောတာ။ ရုရှလုပ် အေကေ လည်းရသလို အမေရိကန်လုပ် အမ် ၁၆ လည်း ရတယ်။ ဈေးပေါတယ်။ ဘာနဲ့ လုပ်လည်းဆိုတော့ လမ်းဘေးက သံတိုသံစတွေနဲ့ လုပ်တာ။ ဗုံးလည်းလုပ်တယ်။ သူတို့ ရဲ့ စားဝတ်နေရေးကို အဲဒါနဲ့ ဖြေရှင်းတာ။ မြန်မာပြည်က ကုလားလည်း အဲဒီလိုမျိူး မလုပ်တက်ဘူးမထင်နဲ့ ။ ဒါက သူတို့ ရဲ အလုပ်ပဲ။
အခု ဦးသိန်းစိန်ပြောင်နေတဲ့ ထိပ်က ပိုပြီး ပြောင်တာတင်မဟုတ် ဂတုံးပါဖြစ်တော့မယ်။ ကုလားအရေးကို ကိုင်တွယ်ဖို့ အတွက် မြန်မာပြည်မှာ ရဲအဆင့်အတန်းမရှိတဲ့ရဲနဲ့ လဘ်စားတဲ့နယ်ခြားစောင့်အပြင် ခိုးပြီးသောင်းကျန်းတဲ့ လ၀ကရဲ့ ပုံစံကိုကြည့်တော့ ရင်လေးမိတယ်။
ဒေါက်တာ ၀က်ကာကိုတော့ သနားမိတယ်။ သူ့ အပြင် အခြားသော ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေကို စာနာပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ စာတတ်မှ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ မသိတာတစ်ခုရှိတယ်။ ဒါကတော့ သူတို့ အရေးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး လူမှောင်ခိုကူးနေတဲ့ကုလား၊ ပြီးတော့ လက်နက်မှောင်ခိုလုပ်တဲ့ကုလား၊ ဒုက္ခသည်အဖြစ်လိမ်စားဖို့ ကျိူးစားတဲ့ကုလား စတဲ့လူလိမ်တွေကို ဒေါက်တာဝက်ကာ မသိဘူး။ ဘယ်သိပါ့မလဲ။ သူက အဲယားကွန်းအခန်းထဲမှာ ကွန်ပြူတာနဲ့ ဇိမ်ကြနေတော့ အောက်ခြေမှာ တကယ်ဖြစ်နေတာကို မသိရှာဘူး။ သူ့ လိုင်းက Pest Management ဆိုတော့ သမိုင်းနဲ့ နိုင်ငံရေးကို မသိရှာဘူး။ ဒီဘဲကြီး ဆော်ဒီကကုလားတွေဆီက မသိမသာရတဲ့ငွေ ဘယ်လောက်တောင်ရှိမလဲမသိဘူး။ နိုင်ငံရေးကို မသိလို့ လည်း ပါးစပ်က ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ရိုဟင်ဂျာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီး ပြောနေတာပေါ့။
သူပြောတာကို အမှန်လို့ ထင်နေတဲ့ မလေးက ကုလား၊ အင်ဒိုကုလား၊ ဆော်ဒီကလားတွေကလည်း သူရဲ့ ဒေါက်တာဆိုတဲ့ ဘွဲ့ ကြောင့် အထင်တွေစွတ်ပြီးကြီး ပေါက်ကရလုပ်။ သွားရောပဲ။ မြန်မာစကားတောင်မနည်းကျိူးစားပြောနေရတဲ့လူ။ အဲဒါကို လူလိမ်တွေရဲ့ ကြပ်ပေးတာကို အမှန်ထင်နေတယ်။
ဒီတော့ ကျနော်သာမြန်မာအစိုးရဆိုရင် ကုလားခေါင်းဆောင်တွေကို ရန်ကုန်မှာအစည်းအဝေးလုပ်ပြီး ထမင်းတောင် အလကားကြွေးချင်ပါရဲ့ ဗျာ။
( အဓိက လေလိုင်းကနေ ကုလားခေါင်းဆောင်က ကြပ်ပေးနေတယ်။
ဘာမှမသိတဲ့ကုလားတောသားက အဟုတ်ကြီးထင်ပြီး ထချလိမ့်မယ်။ )
( အရေးကို ကိုင်တွယ်ဖို့ အတွက် မြန်မာပြည်မှာ ရဲအဆင့်အတန်းမရှိတဲ့ရဲနဲ
့လဘ်စားတဲ့နယ်ခြားစောင့်အပြင် ခိုးပြီးသောင်းကျန်းတဲ့ လ၀ကရဲ့ ပုံစံ )
( ဒါပေမဲ့သူတို့ မသိတာတစ်ခုရှိတယ်။
ဒါကတော့ သူတို့ အရေးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး လူမှောင်ခိုကူးနေတဲ့ကုလား၊
ဒုက္ခသည်အဖြစ်လိမ်စားဖို့ ကျိူးစားတဲ့ကုလား စတဲ့လူလိမ်တွေ )
အာ ဟေးဟေး…ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ ပစ်ကျသွားပြီ..။ (ဖြဲသီး စကားယူလိုက်ဦးမယ်) ..”အို ဘာတဲ့…”
ရိုဟင်ဂျာ ကိုမေ့ထားဖို့ မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး ကိုဘုန်းကျော်
ကျနော်တို့ စီးပွါးရေးက အစပြုရပါလိမ့်မယ်
အားလုံးသာ သူတို့စီးပွားရေးကို အားမပေးဘူးဆိုရင် သူတို့ရဲ့ရပ်တည်မှုတွေ ခက်ခဲကုန်လိမ့်မယ် ။
တပ်မတော်က အကြမ်းဖက်နေတာကိုတိုက်သလို. ။
ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေကလည်း ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ နည်းနဲ့ တိုက်ကြပါ ။
ကျနော်တို့လူမျိုးမဟုတ်တဲ့ အပြင် ကျွန်တော် တို့ကိုသတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ လူမျိုးရဲ့စီးပွားရေးကို အားပေးနေတာလောက် မိုက်တာ လောကမှာ ဘယ်အရာမှမရှိဘူး ။
“အဆိပ်ပင်ရေလောင်းတာတွေ ရပ်တန်းကရပ်ကြပါစို့ “
လက်မ အကြီးကြီးထောင်သွားတယ် ကိုဘုန်းကျော်။
ခင်ဗျားရဲ့ မြင်တတ်တဲ့ အမြင်ကိုလေးစားလွန်းလို့ပါ။
ခင်ဗျားပြောတာ အမှန်ပါပဲ။အခုဆို ကျွန်တော် မြန်မာမွတ်စလိမ်ဆိုင်က ကွမ်းတောင်ဝယ်မစားပါ။
အရင်က ဘာခံစားမှု့မှမရှိပေမယ့် အခုဆိုရင် အလိုလိုနေရင်း မျက်စိစပါးမွှေးစူးနေတယ်ဗျာ။
အရေးအသား အတွေးအခေါ်ကို လေးစားဒယ်ဗျာ
ဟင်… အဲဒီလိုတဲ့လား… !
ဖတ်သွားပါသည် ။ အလွန်ကောင်းပါသည်။ ထောက်ခံပါသည် ။
အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့ရဲ ၊ လဘ်စားတဲ့နယ်ခြားစောင့်အပြင် ခိုးပြီးသောင်းကျန်းတဲ့
လ၀က တွေကြောင့် အခုလို ပြဿနာတွေ တန်းစီ နေရခြင်းပါ ၊
တိုင်းရင်းသားများ စီစစ်တွေးခေါ် အသိဥာဏ်သုံးပြီးသကာလ မိမိတို့
ဘာလုပ်သင့်တယ် ဆိုတာကို သိရှိကြဖို့ အချိန်ရောက်လာပြီးဖြစ်ပါကြောင်း ။
သိပ်ကောင်းတယ် ကဘုန်းကျော် အထူးကောင်း ဗဲရီးကောင်း ကျုပ်လည်းဒီလိုအတွေးမျိုး
အနည်းအကျဉ်းတွေးမိတယ် ခင်ဗျားလောက်တော့ အသေးစိတ်မတွေးမိဝူး ဒဲ့ပြောမယ်
ခုဆိုဒ်ထဲဝင်ဝင်ရမ်းနေတဲ့ကုလားကောင်တွေ ကိုသနားတယ် အတွေးအခေါ်ကရွာသားအဆင့်လောက်
နဲ.ဝင်ဝင်ပြောနေတယ် ဘာအကျိုးအမြတ်မှ မရှိဝူး လူစောက်မြင်ပိုကပ်ပီး သူတို.ကိုပိုရွံသွားတာပဲရှိဒယ်
ရီရတယ် သူတို.ထက်ဆိုးတာ ကျုပ်တို.လူမျိုး လာဘ်စားတဲ့ခွေးမျိုးတွေ ချီးထက်တောင်ရွံဖို.ကောင်းတယ်
နယ်ခြားစောင့်တပ် နဲ့လဝကကို ပဲပုတ်ချက်နဲ့ ထမင်းဖိတ်ကျွေးမယ်ဗျာ
လ၀က.. နယ်စပ်စောင့်တပ်က.. တာဝန်ရှိသူတွေကို.. ခေါ်မေး…စစ်ဆေးပြီး.. သူတို့လာဘ်စားပေးထားတဲ့သူတွေပြန်ရှာ.. နိုင်ငံသားပြန်သိမ်းလိုက်ရင်ပြီးပါတယ်..
လူ့အခွင့်အရေးအရလည်း.. ဒီလိုမတရားယူထားတဲ့.. နိုင်ငံသားပြန်သိမ်းတာမျိုးက.. တရားဝင်ပါတယ်..။
မြန်မာ့မြေထဲတကယ်မွေးထားသူတွေကိုတော့.. အဲဒီနယ်ခြားစောင့်တပ်မှာပဲ.. နယ်စောင့်တာဝန်ပြန်ပေးလိုက်ပေါ့..
That is best comment !
ကိုဘုန်းကျော်မှ သဂျီး ကော်မန့်ကို
“မြန်မာ့မြေထဲတကယ်မွေးထားသူတွေကိုတော့.. အဲဒီနယ်ခြားစောင့်တပ်မှာပဲ.. နယ်စောင့်တာဝန်ပြန်ပေးလိုက်ပေါ့..”
တဂျီးရယ် သွားကြီးဖြဲပြီး အတည်ပေါက်နဲ့မနောက်ပါနဲ့ဂျာ။ ငါးကင် ကိုကြောင်စောင့်ခိုင်း သလိုများ ဖြစ်နေမလားပဲ။
အီရတ်..အာဖဂန်စစ်တိုက်တာတွေမှာ.. ယူအက်စ်စစ်တပ်ဟာ.. အမေရိကန်မဟုတ်သူ… တခြားနိုင်ငံသားတွေကို.. ယူအက်စ်မှာ အမြဲတန်းနေခွင့်ပေးမယ်ဆိုပြီးစည်းရုံးထားသူတွေ.. သုံးခဲ့တယ်..
ယူအက်စ်နဲ့..မက်ဟီကိုနယ်စပ်မှာ.. နယ်ခြားစောင့်သူအစိုးရ၀န်ထမ်းတွေထဲ.. မက်ဟီကို… ဟစ်စ်ပန်းနစ်ဇာတိနွယ်တွေ ၂၀ရာခိုင်နှုန်းမက.. ရှိတယ်..
PolitiFact | Thousands of “green card” soldiers in Iraq
Jul 11, 2008 – U.S. forces in Iraq and Afghanistan includea“few thousand that are still green card holders who are not even citizens of this country.” …
joining US Army – get green card.
20 posts – 13 authors – Mar 19, 2009
friends, i heard that if you join US army and work there for some 1 year and help … you will get citizenship in six months, not green card. …. with his baby boy then was sent to Afghanistan and was killed about2months ago.
သဂျီး ဘယ် post အောက်မှလဲမသိတစ်ခါပြောဘူးသေးတယ်ထင်တယ်။ စစ်တိုက်ခိုင်း ဖို့ဆိုရင်တော့ မဆိုးပါဘူးသဂျီးရေ
အမှန်ပါဘဲ ကိုခိုင်ရေ။လဝကတွေ သိမသိတော့မသိပါ။ကျနော်တို့ ဆီဖက်တောင်လွင့်လာတဲ့သူတွေ
မနည်းဘူး။ဘယ်လမ်းကိုဝင်လို့ ၊ထွက်ပါလိမ့် တွေးမိပါတယ်။အကြိမ်ကြိမ်ဖမ်း၊အကြိမ်ကြိမ် ဝင်ပါတယ်။
တစ်ခု ထူးရှားတာက လူကုန်ကူးသူတွေဟာ များသောအားဖြင့် ရခိုင်တွေဘဲ။ကုလားအချို့ လဲပါ ပါတယ်။
ကျနော် သိသလောက်ပါ။တိကျအောင် မပြောချင်။
ဟဲဟဲ ၊ ကိုပေ က စွတ် ထောက်ခံနေတာကိုး ။
ပထမ အချက်ကတော့ OK ပါ ။ ဘာတဲ့ ။
” မတရားယူထားတဲ့.. နိုင်ငံသားပြန်သိမ်းတာမျိုးက.. တရားဝင်ပါတယ် ”
သူကြီးပြောသွားတဲ့ ဒုတိယ အချက်ကို သေချာပြန်ဖတ်ပါအုန်း ။
” မြန်မာ့မြေထဲ တကယ်မွေးထားသူတွေ ကိုတော့..
အဲဒီ နယ်ခြားစောင့်တပ်မှာပဲ.. နယ်စောင့် တာဝန်ပြန်ပေးလိုက်ပေါ့ ”
မြန်မာ့မြေထဲ တကယ်မွေးထားတဲ့ ( ဘင်္ဂါလီ ကုလား ) တွေကိုတော့..
အဲဒီ နယ်ခြားစောင့်တပ်မှာပဲ.. ( ဘင်္ဂါလီ ကုလား ) တွေကို နယ်စောင့်တာဝန်ပြန်ပေးလိုက်ပေါ့ တဲ့ ။
ကိုပေ ၊ ကျနော်တို့ သူကြီးက ၊
ဒီမိုကရေစီ နှင့် လူ့အခွင့်အရေး သူကြီးလေဗျာ ။ မမေ့နှင့်လေ ။
ကြုံတုံးလေး ၊ ရွာသူားတွေကို တစ်ခုတော့ ပြောခွင့်ပြုပါဗျာ ။
ဆရာသမားတို့ ၊ ပြောပြောနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ နှင့် လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတာ ၊
ကိုယ်က ရတာကြီးပဲ ၊ သာတာကြီးပဲ မဟုတ်ရပါဗျာ ။
ကိုယ်က ပေးရတာ ၊ ခံရတာတွေလည်း အချိုးမျှစွာ ပါဝင်ပါတယ် ။
အဲဒီ ဒီမိုကရေစီ နှင့် လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတာကြီးကို မကြိုက်တော့ရင်လည်း ။
စစ်အစိုးရကို မလိုချင်တော့ပါဘူးဆိုပြီး ပြန်အပ်ဖို့ ၊ အချိန်မှီသေးတယ်နော် ။
မလိုချင်တော့ပါဘူးဆိုပြီး ပြန်အပ် ရအောင် ဘယ်တုန်း က ရခဲ့ လိုက်တာပါလိမ့်။ ;-)
လူမျိုးရေးမဟုတ်ဘူးလဲပြောသေးတယ်၊ စောက်ကုလား လို.လဲ ရေးသေး
ကုလုမ်း လို့ ရေးရမှာလား ဟေ
ဗိုလ်မင်းမောင်လေးကတော့လေ နားလည်လို့လား တော်ကြာဗိုလ်မင်းကိုပြောနေအုံးမယ် ကုလားလားဆိုပြီးနာနေတယ်လို့ပြောခံချင်လို့ မမတောင်နားမလည်လို့ဖတ်ဘဲဖတ်တယ် မန့်တောင်မမန့်ဘူး ။။
ကိုယ်က ကုလားဖြစ်မှဘဲ ကုလားဘက်လိုက် ပြောရမှာလား၊ မှန်တာပြောတာဘဲ၊ ဘယ်သူမှ စောက်ဂရုမစိုက်ဘူး၊
ဒီမှာ မင်းတို.ကိုပြောထားမယ်၊ ကုလားဆိုတာ ဥာဏ်ရှိတဲ့ အမျိုးမဟုတ်ဘူး၊ သိပ်ပြီး သွားမဆွနဲ.၊ ကိုယ်နဲ. မဆိုင်ရင် မဆိုင် သလိုနေ၊ တော်ကြာ အယ်ကေဒါ ၀င်လာမှ ဟုတ်ပေ့ဖြစ်နေမယ်၊ အမေရိကန်တောင် ဒီကောင်တွေကို မနည်းရှင်းနေရတာ၊ မြန်မာစစ်တပ်ဆို တစ်နှစ်တောင်ခံမှာမဟုတ်ဘူး
—-ကိုယ်နဲ. မဆိုင်ရင် မဆိုင် သလိုနေ—-
လက်သည်းဆိပ်ရင် လက်ထိပ်ဆိုတာ နာတတ်ရတယ် …
ဟုတ်ပါတယ် ကုလားဆိုတာ ဥာဏ်သိမ်တဲ့အမျိုး မဟုတ်ပါဘူး ……..
ဒါကြောင့်လည်း ကလိန်ကျစ် ကလိန်ဥာဏ်တွေကို ကြိုတွေးကြ … ကြိုပူနေကြတာပါ …. ။ ဖတ်ရင်းနဲ့ ဇာတိတွေ ပေါ် ပေါ် လာတယ် … ။
ဟိုနေ့က ကော်နက်ရှင်တော်တော်ဆိုးနေလို့ မန့်မရတာကွ အခုလာဘီ။
King of Secrets (Bo Min) ရေ….(ကုလားဆိုတာ ဥာဏ်ရှိတဲ့ အမျိုးမဟုတ်ဘူး)
မင်းကိုယ်မင်းတော့သိသားပဲ။ဥာဏ်ရှိတဲ့ အမျိုးမဟုတ်လို့ပဲ မင်းတို့ကို အထင်မကြီးတာပေါ့။
အယ်ကေဒါ မျိုးမစစ်ကောင်တွေကို ငါတို့မြန်မာက ကြောက်မယ်ထင်နေလား။
ခွေးသေ၊၀က်သေထက်ဆိုးသွားမယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေတာ မြင့်မြတ်တယ်၊
အားကျတယ်ဆိုရင်လဲ မင်း အယ်ကေဒါထဲဝင်ပြီး လာတိုက်ကြည့်လေ။
အမေရိကန်က မြန်မာဘက်ကသာပါရလိမ့်မယ်။မင်းတို့ အဖေတွေက အကြမ်းဖက်တွေကိုးဟ။အမေရိကန်ကို ဆော်ထားတာလဲ မင်းအဖေတွေကိုး။
ဒါဆို မင်းတို့ကောင်တွေ အကုန်မျိုးပြုတ်ပြီသာမှတ်။ဒါဆို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု့တွေ မရှိတော့တဲ့
မြန်မာနိုင်ငံဟာ အမေရိကန်နဲ့ မဟာမိတ်ဖြစ်ပြီး အရမ်းတိုးတက်သွားပါလိမ့်မယ်။
ကြိုဆိုပါတယ် အယ်ကေဒါ မြန်မြန်သာ သတ္တိရှိရင် ၀င်ခဲ့ပါ။
Yunn Nady says:
ငါလိုး မသား မင်းက တာလီဘန် လောက် ကြောက်တဲ့ ကောင်
အေးလကွာ ကပြားဖြစ်လို့ ဝင်နာနေတာ လားမှ မသိတာ
နောက်ဆို ဒီထက် ပို ပို ဆိုးလာတော့မှာ
“Your comment has been deleted by the administrator”
– Member တဦးသည် အခြားMemberအပေါ် ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ.. မှတ်ချက်/ထင်မြင်ချက် ပေးရန် လုံးဝ(လုံးဝ)အခွင့်မရှိ…
ကလီး တစ်ကောင်တော့ တက်လာပြီ ၊
ကိုဘုန်းကျော်ရေ ရှင်းပါ လင်းပါ ၊
သူပြောတာ ဟုတ်လို့ ငြိမ်ခံနေလေသလား ၊
ဒီကလီးကတော့ အပိုင်ကိုသိနေတယ် ထင်ရတာပဲ ။
သြစတျေလျကို အနေချောင်လို့ ”
ဒီ Comment ကတော့ Personal တော်တော် ပါသွားပြီနော် ။
Idea အတွေးအခေါ်ကို Idea အတွေးအခေါ် နှင့်ပဲ ရှင်းသင့်ပါတယ် ။
ဒီ Comment ထဲက အချက် အလက်တွေ မှန်သည်ထားအုန်း ၊
ဒီလို မရေးသင့်ဘူး လို့ ထင်ပါတယ် ။
ဒီ Comment က မျဉ်းတားဖျက်ရုံလေး နှင့် မလုံလောက်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ် ။
ကိုဘုန်းကျော် ကသာ ခွင့်ပြုရင် ၊ Comment တစ်ခုလုံး ဖြုတ်ပစ်ရမှာပါ ။
ကျနော်ဟာ ဘယ်တုန်းကမှ ကိုဘုန်းကျော်ဖက်က မထောက်ခံခဲ့ဘူးပါဘူး ။
ကိုဘုန်းကျော်ကို ပုဂ္ဂလိက ဝိုင်းဆဲကြတုန်းကလည်း ၊ ဝင်မပြောခဲ့ပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် ၊ ဒီတစ်ခါတော့ Personal တူးဆွတာ တရားလွန်သွားပြီလို့ ထင်ပါတယ် ။
ုပြောပါစေ ဦးဖော။ သူလည်းပေါက်ကွဲတတ်မှာပေါ့။ လူပဲဟာ။ စာမဖတ်တဲ့ကုလားဖြစ်တာတော့သေချာတယ်။ ဘုန်းကျော် သမိုင်းကို လူအတော်များမျာသိပါတယ်။ မနေ့ ကလည်း အင်ဒိုနီးရှားက ကုလားက ကျနော့်ကို ခေါင်းဖြတ်မယ်လို့ တောင်ခြိမ်းခြောက်တော့ တချိူ့ ကုလားတွေ ခေါင်းမရှိတာတော့သေချာပါတယ်။ ဒါနဲ့ များ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ရိုဟင်ဂျာအရေးတောင်းကြလဲမသိဘူး။ ဘုန်းကျော်သမိုင်းကို သိချင်ရင် ဘုန်းကျော်ဘလော့ဂ့်ကိုသွား။ ဘယ်လိုမျိူး ဖာချလဲအထိပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရေးထားပါတယ်။
ကျုပ်တို့ဘော်ဒါတွေထဲလည်း အရပ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ ကလားရှိသပေါ့
ကျုပ်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ အသားမဲရင်အကုန်ကလားလို့ဘဲ ထင်တာ
ဟိန္ဒူ အစ္စလာမ် ဆိုပြီး ဘာလို့ခေါ်ရမဒုံး ထားဘာဒေါ့ ကလားတွေကွဲတယ်ဆိုတာ အရွယ်ရောက်မှသိတာ
တစ်ချို့ကိုဆိုရင်လည်း ကလားလို့ဘဲ နာမည်ခေါ်တာဘဲ
ကလား ဆိုတဲ့အခေါ်ဝေါ်လေးကို လေယူလေသိမ်းလေး အပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်း
ကြားရသူမှာ ခံသာတာ မခံသာတာ ရှိသပေါ့
စောက်သုံးမကျတဲ့ အစိုးရလက်ထက်မှာ စောက်သုံးမကျတဲ့ လဝက ငါလိုးမသားတွေ ကြောင့်
အဲ့သည်လူမျိုးတွေ အတော်များများ မြန်မာပြည်သားဖြစ်ကုန်တာကတော့ ( ဝမ်းနည်းစရာဘဲ )
သက်ဆိုင်ရာ လဝက နွားတွေကို
နှုတ်နှုတ်စဉ်းပြီး ခပ်စပ်စပ်လေး ကြော်လှော်ချက်ပြုတ် အမြည်းလုပ်ပြစ်သင့်ဘာဂျောင်း
စားကလောက်တွေကို ဖန်းကြုံက တော့ ကလော်လိုက်ပြန်ပြီ
အမှန်အတိုင်းမပြောဘဲလိမ်တတ်တာ သူတို့တွေဘဲ ထိုင်း၊အင်ဒိုနီးရှား၊အာဖကန်နစ်စတန် အီဂျစ်မှာ ဖြစ်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ကိုမြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်တယ်ဆို ပြီးလိမ်တယ်လေ အဲ့ဒီ ကလပေါ့။တချို့ဓာတ်ပုံ တွေ က ၂၀၀၇ခုနှစ် သံဃာတော် အရေးအခင်းကို စစ်သားတွေ သူတို့ကိုရိုက်နေပါဘီဆို ပြီးဒီတပတ်မှာ ဘဲ အင်ဒိုနီးရှားမှာရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ လိမ်နေတာလေ